Sidee Teknolojiyadda Dijital ah u Saameyneysaa Muuqaalka Muuqaalka Hal-abuurka ah | Martech Zone
Mid ka mid ah mowduucyada sii socda ee aan ka maqlo horumarka xagga teknolojiyadda ayaa ah inay shaqooyinka halis gelinayso. In kasta oo ay run ka noqon karto warshadaha kale, haddana waxaan si dhab ah uga shakisanahay inay ku yeelanayso saamayntaas suuq-geynta gudaheeda. Suuqleyda ayaa hadda cakiran maadaama tirada dhexdhexaadiyeyaasha iyo kanaalada ay sii kordhayaan halka ilaha suuqgeyntu weli taagan yihiin. Teknolojiyaddu waxay siineysaa fursad ay ku otomaatigaan howlaha soo noqnoqda ama gacanta, iyagoo siinaya suuqleyda waqti dheeraad ah oo ay kaga shaqeeyaan xalalka hal-abuurka ah.
Waqti hore ayaa la maray maalmihii ay suuqgeynta iyo kooxaha xayeysiintu waqtigooda ku qaateen sameynta dhowr qaybood oo xulasho ah oo loogu talagalay kanaallada dhaqameed. Dijital ayaa isbeddelay ku dhowaad dhinac kasta oo hal abuur leh, laga soo bilaabo sida loo sameeyay iyo sida loo qaybiyay. Sidee dhab ahaan wax isu beddeleen? Is beddelkee ayaa saameynta ugu weyn yeeshay? Dijital ma dishay xiddigga hal-abuurka ah? Si aad u ogaato, hubi infograafiga MDG, Sidee Dijital ah ugu beddelay Muuqaalka Muuqaalka Hal-abuurka ah.
Faahfaahintan ayaa si toos ah uga hadlaysa caqabadaha iyo fursadaha ku xeeran muuqaalka hal-abuurka. Xayeysiinta MDG ayaa isku dubariday xogtan oo faahfaahinaysa sida muuqaalka hal-abuurka ah uu u beddelayo horumarka xagga teknolojiyadda. Waxay taxaan shan isbeddel oo kala duwan:
Hal-abuurradu Waxay Soosaarayaan Foomammo Badan Oo Badan Oo Farsamooyin Badan Ah - Isbedelka ugu weyn ee dijitaalku u keenay hal-abuurka ayaa ah inay labaduba kordhisay tirada meheradaha ay u baahan yihiin inay ku lug yeeshaan iyo tirada noocyada ay u baahan yihiin inay horumariyaan.
Shakhsiyeynta iyo Barnaamij ahaanta ayaa wadista xitaa dalabyo badan oo loogu talagalay hal abuurka - Saameynta kale ee ugu weyn ee dijitaalka ah ayaa ah inay ka dhigtay mid wax ku ool ah in lagu bartilmaameedsado dhagaystayaal gaar ah, iyo xitaa shaqsiyaad gaar ah, oo leh qaybo gaar ah oo hal abuur leh.
Xogta iyo aaladaha cusub waxay badaleen dabeecada hal abuurka - Dijital ma beddelin oo keliya sida qaybaha loo qaybiyo, laakiin sidoo kale sida loo sameeyo. Qeyb ahaan, tani waxay qaadatay qaab qalab cusub, sida qalabka iyo softiweer, loogu talagalay sameynta hal-abuurka.
Hal abuurayaashu waxay bilaabeen inay si isdaba joog ah ugu tiirsanaadaan otomatiga iyo AI - Sidee ayay hal-abuurayaashu ugu suurtagashay inay soo saaraan qaybo badan oo dheeri ah iyo sidoo kale inay iskaashi badan yeeshaan oo ay soo baxaan iyada oo aan miisaaniyaddu ka weyneyn? Qeyb weyn, iyo qaab kale oo isbeddel ku keenaya dijitaalka, ayaa ahaa otomaatig.
Dimuqraadiyeynta hal-abuurka ayaa hibad ka dhigtay mid ka muhimsan weligeed - Habka ugu muhiimsan ee dijitaalku u beddelay hal-abuurka ayaa ah inay dimoqraadiyeysay; leh taleefannada casriga ah iyo warbaahinta bulshada ku dhowaad qof kastaa wuxuu la wadaagi karaa wax kasta oo internetka ah. Tani waxay horseeday daadad sii kordhaya oo ka kooban macaamiisha, maahan oo keliya hal-abuurka.
Waa tan faahfaahinta buuxda, Sidee Dijital ah ugu beddelay Muuqaalka Muuqaalka Hal-abuurka ah.
Tags: aisirdoonka macmalqalabayntahal abuur lehDatadimuqraadiyeyntaqaababkainfographicshakhsi ahaaneeddhufto eebarnaamijkabarnaamij xayeysiis